Divorce with children: communication is key - Law & More B.V.
Ummeli Wokudlulisa Amacala
Ummeli Oqoqa Izikweletu
Iseluleko seHhovisi Lomndeni
Intellectual Property (IP) Ummeli
Izisekelo Zokupha & Zokupha
I-Pharma & Isayensi Yezempilo
I-Netherlands Dutch Bar Association
I-World Law Alliance
Izindawo Zokubhalisa Zomthetho
Thayipha umbuzo wakho wokucinga bese ushaya u-Enter:
Isehlukaniso nezingane: ukuxhumana kuyisihluthulelo
Lapho isinqumo sesehlukaniso sesenziwe, kuningi okufanele kuhlelwe bese kuxoxwa ngakho. Abalingani abahlukanisayo bavame ukuzithola be-rollercoaster engokomzwelo, okwenza kube nzima ukufika ezivumelwaneni ezinengqondo. Kuba nzima kakhulu uma kunezingane ezihilelekile. Ngenxa yezingane, nibophezeleke kakhudlwana komunye komunye nomunye impilo yonke. Kuzofanele nenze amalungiselelo ndawonye ndawonye. Lokhu kwenza isehlukaniso nezingane kuzo zonke izimo zikhathaze kakhulu ngokomzwelo futhi kube nomthelela omkhulu ezinganeni. Ukuze kwehlukaniswe ngangokunokwenzeka, kubalulekile ukwenza lezi zinqumo ndawonye futhi ukuxhumana okuhle phakathi kwamaqembu kuyinto ebalulekile. Ngokuxhumana okuhle, ungavimbela ukulimala ngokomzwelo komunye nomunye kodwa nakubantwana bakho.
Ukuxhumana nowawushade naye
Sibuqeda ubudlelwano ebesibuqalile bugcwele okulindelwe nezinhloso ezinhle kakhulu. Ebudlelwaneni, uvame ukuba nephethini elungisiwe osabela ngayo komunye nomunye njengabalingani. Isehlukaniso yisikhathi sokugqashula kulelo phethini. Futhi uzibheke kahle, ngoba ufuna ukwenza izinto ngendlela ehlukile kusuka manje, uzenzele wena kepha nezingane zakho. Noma kunjalo, kwesinye isikhathi kuba nokudumazeka nokungaqondi kahle. Isisekelo sobuhlobo bonke ukuxhumana. Uma sibheka lapho izinto zingahambi kahle khona ekuxhumaneni kwethu, kuvela ukuthi ukwehluleka imvamisa akusuki kokuqukethwe yingxoxo kodwa kusuka endleleni okushiwo ngayo. Lowo omunye umuntu ubonakala ngathi 'akakuqondi' futhi ngaphambi kokuthi wazi uzithole usezicupheni ezindala ezifanayo futhi. Ukwamukela nokulungisa isehlukaniso kungumsebenzi onzima ngokwako enganeni. Ngenxa yokuxhumana okungafanele phakathi kwabalingani bakudala, izingane zingaba nezinkinga ezingokwengqondo nangaphezulu.
Imiphumela yesehlukaniso ezinganeni
Isehlukaniso yisenzakalo esibuhlungu esivame ukuhambisana nengxabano. Lokhu kungathinta umlingani ngokomzimba nangokwengqondo, kepha nezingane. Imiphumela ejwayelekile kakhulu yesehlukaniso ezinganeni ukungazethembi, izinkinga zokuziphatha, ukukhathazeka nemizwa ecindezelekile. Lapho isehlukaniso siphikisana kakhulu futhi siyinkimbinkimbi, imiphumela yezingane nayo iba mibi kakhulu. Ukwenza ukunamathela okuphephile nabazali kuwumsebenzi obalulekile wokukhulisa izingane ezincane. Ukunamathiselwa okuphephile kudinga izimo ezithandekayo, njengomzali otholakalayo onikeza ukuthula, ukuphepha, ukuzinza nokwethembana. Lezi zimo zingaphansi kwengcindezi ngesikhathi nangemva kwesehlukaniso. Ngesikhathi sokuhlukana, kubalulekile ukuthi izingane ezincane zikwazi ukuqhubeka nokuhlangana nabazali bazo. Ukuxhumana okuphephile nabazali bobabili kubalulekile lapha. Okunamathiselwe okungavikelekile kungaholela ekwehliseni ukuzethemba, ukunciphisa ukuqina nezinkinga zokuziphatha. Izingane nazo zivame ukuzwa ukwehlukaniswa njengesimo esicindezelayo ezingakwazi ukusilawula noma ukusithonya. Ezimweni ezicindezelayo ezingalawuleki, izingane zijwayele (ukuzama) ukungazinaki noma ziyiphike inkinga futhi zize zithathe isimo sengcindezi yangemva kwenhlekelele. Ukucindezeleka nakho kungaholela ezingxabanweni zokwethembeka. Ukwethembeka kuyisibopho esingokwemvelo phakathi kwabazali nengane esivele lapho izalwa lapho ingane icishe iqotho kubo bobabili abazali bayo. Ezingxabanweni zokwethembeka, omunye wabazali noma bobabili bangathembela kakhulu enganeni yabo. Esehlukanisweni esiyinkimbinkimbi, kwesinye isikhathi abazali bangaphoqa ngokungazi noma ngokungazi ukuthi ingane yabo ikhethe. Lokhu kudala ingxabano yangaphakathi enganeni, efuna ngokwemvelo ukwethembeka kubo bobabili abazali. Ukukhetha kungumsebenzi ongenathemba enganeni futhi kuvame ukuholela ekutheni izame ukukhetha phakathi kwabazali bobabili. Kungenzeka ukuthi ingane ifike ekhaya kunina ivela ngempelasonto noyise bese ithi kuyise bekumnandi kakhulu, kepha kunina kube yisicefe esesabekayo. Ucwaningo lukhombisa ukuthi kubalulekile ukuthi ingane ithole imvume komunye umzali ukuze ibe nesikhathi esihle nomunye. Kwezinye izehlukaniso, kungenzeka nokuthi ingane icabange ukuthi inguye noma yenziwe isibopho senhlalakahle yomzali. Ingane ibizelwe (futhi / noma izizwa) ukuthi inakekelwe ngendlela engafanele. Imiphumela engenhla ijwayelekile esehlukanisweni sabazali lapho kunokuxhumana okuningi nokungezwani phakathi kwabazali.
Njengomzali uyifunela okuhle ingane yakho, ngakho-ke lokho kuyisizathu sokugwema izinkinga zokuxhumana. Ngezansi, sinikeza ngamathiphu amaningi wokuqinisekisa ukuthi uqhubeka nokuxhumana kahle nalowo owawungumlingani wakho ngesikhathi esinzima sesehlukaniso sakho:
Kubalulekile ukuqhubeka nokubonana futhi nixoxe ubuso nobuso. Zama ukugwema ukwenza izinqumo ezinzima nge-WhatsApp noma ngocingo.
Lalela omunye umuntu (kodwa zibheke wena!) Lalela ngokucophelela omunye umuntu bese uphendula kuphela kulokho akushoyo. Musa ukuletha izinto ezingahambelani nale ngxoxo.
Njalo zama ukuhlala uzolile futhi uhloniphane. Uma ubona imizwa iphakama phakathi nengxoxo, yimamise ukuze ukwazi ukuqhubeka nayo ngokuthula kamuva.
Uma ubeka ngokushesha zonke izimfuno zakho etafuleni phakathi nengxoxo, lokhu kungadumaza umlingani wakho. Ngakho-ke, zama ngokuthula wenze izinqumo mayelana nezinto ngamunye ngamunye.
Noma nini lapho uxoxa ngendaba, njalo zama ukwenza lowo owawungumlingani wakho ukuthi asabele futhi akhulume. Lokhu kuzokunikeza umbono ocacile wokuthi lowo owawungumlingani wakho ucabangani ngale ndaba.
Ezingxoxweni, zama ukwenza izinto esikhundleni sokukhononda ngezinto zomlingani wakho wangaphambili. Uzobona ukuthi ngesimo esihle uzoba nezingxoxo ezingcono.
Ukusiza ingxoxo iqhubeke, kuyasiza ukugwema amagama avaliwe njengokuthi 'njalo' nokuthi 'ungalokothi'. Ngale ndlela, ugcina ingxoxo evulekile futhi ungaqhubeka ube nezingxoxo ezinhle.
Qiniseka ukuthi ungena kwinhlolokhono uzilungiselele kahle. Lokhu kufaka ukucabanga ngezinto ezingaba nzima noma ezingokomzwelo kuwe.
Vumelana nokuthi ukucasuka kufanele kuvezwe ngqo, futhi kungagcinwa kufakwe emabhodleleni.
Khuluma ngezingxoxo onazo nabantu osondelene nabo. Ngale ndlela unokukhipha imizwa yakho futhi bangakusiza ukuthi ubeke izinto endaweni efanele noma bakunikeze amanye amathiphu ezingxoxo ezizayo.
Kunezinhlobo ezahlukahlukene zosizo ezitholakalayo uma isehlukaniso sinzima, ngaphandle kokuxhaswa ngummeli wakho kanye / noma nomlamuleli. Isibonelo, ungafuna ukusekelwa kubantu osondelene nabo, osonhlalakahle noma abahlupheka nabo. Uma kukhulunywa ngokuxhasa izingane, kunezinhlangano zokuzithandela nezinsizakalo zentsha ezinganikeza ukuholwa. Ukukhuluma ngezinqumo ezinzima kunikeza ukuthula kwengqondo, ukucaciseleka futhi kunomthelela esimweni esihle sengqondo.
Ukuthi izintshisekelo zezingane kufanele zize kuqala kubonakala kuyazicacela, ngakho-ke akufanelekile ukukusho. Kepha kungaba ukhiye obalulekile uma ungakwazi ukusebenzela okuthile ndawonye: cabanga ngokuthi izingane zingathanda ini? Lokho kuxazulula izingxoxo eziningi. Ukuqaphela iphethini lapho ubhajwe khona ndawonye isinyathelo sokuqala sokukuvimba. Ukuthi ungayimisa kanjani iphethini enjalo akuyona into elula: lokhu kuyimidlalo esezingeni eliphezulu futhi kudinga ukuthi wena, njengomzali, ubheke ukuthi yini edingekayo ezinganeni nokuthi imizwa yakho iqhamuka kuphi lapho uxhumana nalowo owawungumlingani wakho. Indlela esheshayo yesikhathi esizayo ukubona ukuthi yini ekuthintayo futhi ube nesibindi sokuzibuza umbuzo okwenza ukuthi uvale futhi ungabe usakwazi ukuxoxa ngezinto ngendlela enengqondo nomunye umzali. Futhi imvamisa lapho ukhiye ulele khona.
Ngabe uhlela isehlukaniso futhi ufuna ukuhlela konke ngangokunokwenzeka ezinganeni zakho? Noma usenezinkinga ngemuva kwesehlukaniso? Unganqikazi ukuxhumana ne- abameli bezahlukaniso of Law & More. Sizojabula ukukululeka futhi sikusize.
Olandelayo Yini ukuhlangana okusemthethweni? »
Previous «Faka isikhalazo ngenkantolo